Ukuthimba iBhlog: SR Coley | Martech Zone
Ukuthimba iBhlog: SR Coley
NgoLwesihlanu, Julayi 6, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Le ikhethekileyo! UStephen ngumhlobo olungileyo ka unyana wam, uBill. UStephen ungumfo omkhulu-okrelekrele kakhulu, onomdla kakhulu, kwaye unesigulana esimangalisayo. Ndiyazi xa endibuza umbuzo wokuba mhlawumbi sele engalalanga ebusuku ngoko ndiyakonwabela ukumnceda.
Ibhlog kaStephen kufuneka ibe nomdla kakhulu kulo nyaka uzayo njengoko esiya eJamani. IJamani iyaziwa ngokuba yiyo ukuswela zebhlog. Ayisiyonto imbi-ngokwenkcubeko nje, ilizwe lithambekele ekubeni yintlalo ngaphandle kwemithombo yeendaba kwaye labucala ngaphakathi kwimidiya yoluntu. Esi mhlawumbi sisifundo esihle eMelika naseAsia ukuba bafunde… siza kubhalela okanye bathumele i-imeyile abantu kwigumbi lonke endaweni yokuthumela i-imeyile!
Nazi iingcebiso zebhlog yakho:
UStephen, ndiyayithanda indlela ebanzi ngayo ibhlog yakho. Uhlobo lucoceke kakhulu. Ungumntu othuleyo kodwa ndiyazi ukuba unelinye icala, nawe. Ndiyabona ekugqobeni igeyiji yakho enkulu kwaye umamele Guqula! Ukuba uthathe umfanekiso wakho, ngekhe ndicinge ukuba unokubhoboza oko. Ndiyazibuza ukuba ungayisebenzisa njani ngandlela thile ukuhombisa indawo yakho ukuze abantu bazi ukuba unoxolo, icala elilungiselelwe kwangaphambili kwaye icala lokuyila (ukukhwaza?). 🙂
Mhlawumbi lukhona uhlobo oluthile lomhombiso kumfanekiso wesihloko esingasemva? Jonga lo mfanekiso ungasemva kwi-pownce:
Ngaba into enjalo inokusebenza? kwenye indawo kancinci ngasemva?
Ukhetho lomntu siqu, kodwa ndiza kuthatha amanqaku e-Digg. Zilunga kakuhle, kodwa unamaphepha kunye namaphepha amaqanda erhanisi (ooziro). Ndicinga ukuba iyasusa kwizithuba zakho ngaphezu kokuba isongeza. Mhlawumbi ungasebenza umlingo kwaye uwufihle ku-0 kwaye ubonise xa umkhulu kuno-1? Ukubonisa isikhundla kunye nezibalo kubonelela abafundi ngengqondo yokuba ibhlog okanye iposti ibalulekile. Kodwa ukuba nenqanaba eliphantsi okanye izibalo kunokubathintela abantu ekufundeni okanye ekubhaliseni!
Ndikhankanye le iplagi kwenye ukuncwina: Ukugcina abantu ngeenxa zonke, ndingacebisa Iplagi yeZithuba ezihambelanayo kwaye ubeke iiposti ezinxulumene noko emazantsi eposi nganye. Ngale ndlela abantu abakufumanayo ngeNjini yokuKhangela baya kufunda iiposti zakho kwaye ukuba abayifumani ngqo le nto bayifunayo, banokuncamathela kumanqaku ongezelelweyo akwisifundo esinye. Oku kuyanceda nakwi ukudibanisa okunzulu Uluhlu lweeNjini zokuKhangela.
Umahluko kwizithuba zakho ngemifanekiso. Imifanekiso kwizithuba ihlala ithatha ingqalelo yabafundi-ngakumbi ukuba babhalisile ngesondlo. Yiya engxakini yokufumana umfanekiso olungileyo okanye isiqwenga se clipart kwaye uyithumele ngeposi yebhlog. Ndingayenza le nto ngokukodwa kwizithuba zakho zokuKhuphela uMsebenzi! Isikrini okanye ilogo yesoftware iya kubamba ingqalelo yomntu. Kananjalo unokufuna ukwenza ubunzima befonti yebhloko yakho yeposi ukuze baphume kancinci. Xa ndifunda iphepha lakho, ndizifumana nditshekisha ngaphezulu kwezihloko (mhlawumbi ndim kuphela!)
O-kwaye ndifumene impazamo elula ukuyilungisa- ifayile yakho yeerobhothi.txt yalatha kwimephu engeyiyo. Iindaba ezimnandi zezokuba unayo imephu yendawo! Iindaba ezimbi kukuba iGoogle isenokungarhubuluzi kwindawo yakho ngokufanelekileyo ngaphandle kwayo.
Inye into yokugqibela… into ejongeka ngathi iphazamisekile kwikhonkco kwisithuba osimisileyo. Ngamanye amaxesha xa ukopa ikhowudi kwi-HTML iyamoshakala.
Yonwabela, uStephen! Kwafuneka ndikhangeleke nzima kwaye ndigxeke kwindawo yakho. Wenza umsebenzi omnandi!
Uyifumana njani iBhlog yakho
Ukuba ungathanda iBhlog yakho Ikhutshiwe, landela umkhombandlela ku- my Iposti yeBhlog.
tags: umfanekiso ongasemvaNdibuleleidiggPluginizithuba ezinxulumeneiirobhothimzantsiwebuStephen Coley
Douglas Karr Friday, July 6, 2007 Sunday, October 4, 2015
Ukucoca iBhlog: I-Winextra
Ukuthimba iBhlog: Ii-PGA-Auctions
NgoJulayi 6, 2007 ngo-9:50 PM
Enkosi kakhulu Doug! Ndilungise ikhonkco kwiposi yam. Yayinento yokwenza namanqaku okucaphula.
Nangona kunjalo, ndiyabulela kakhulu ngokugxekwa kwakho. Usenokuba uqaphele ukuba khange kubekho mininzi kakhulu imixholo kwibhlog yam mva nje, kodwa ngoku ukuba ndinawo wonke lo msebenzi ekufuneka ndiwenze, kufanele undibuyisele endleleni. Enkosi kwakhona. Ngendingafuni ukuba ibhlog yam inikwe iingcebiso ngomnye umntu.
NgoJulayi 6, 2007 ngo-11:40 PM
Enkosi uStephen! Ngenene uye watsiba ngaphandle kwamasango ngesantya esiphezulu.